izany hoe 150.000 eo ho eo ny fisoratana anarana. Ny tena famaranana vonjimaika dia ny faha-28 no hosoniavina. Haverina eny anivon’ny fokontany manerana an’i Madagasikara ny 1 martsa ka hahafahana manao fanamarihana ao anatin’ny 20 andro. Hofaranana tanteraka amin’ny 15 mey, ka izay lisitra mifarana eo no ampiasaina amin’ny fifidianana na fitsapan-kevi-bahoaka hatao amin’ity taona ity, raha ny fanazavan’ny filoha lefitry ny CENI Atoa Thierry Rakotonarivo. Tsy atao mahagaga ny endrika fahakivian’ny olom-pirenena amin’ny resa-pifidianana eto Madagasikara. Maro ireo toe-javatra toa niteraka adihevitra, toy ny fahatsapana tsy rariny, tsy fanarahan-dalàna,… saingy vitavita ho azy ireny na mety mahatsapa aza ny ankolafin-kery sasany eto amin’ny firenena fa nanana ny porofo mafonja mitohaka amin’ny tenda. Maro ny fanapahan-kevitra miteraka adihevitra, toy ny fifidianana tsy misy fitairanana sy fitoriana kanefa foanana kanefa misy ireo nanaovana fitoriana maro be ambara fa azo raisina fa tsy mitombina. Teo ihany koa ny fitsimbadihana vokatra, toy ny hoe ny laharana fahatelo no lasa lany. Mila fandinihana lalina ny resa-pifidianana eto Madagasikara.